ऊँट, ढुवानीको एक धेरै कुशल साधन | Absolut यात्रा
धेरै पुरानो समयदेखि, लगभग ,3.000,००० वर्ष पहिले, मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ऊल विश्वको केही क्षेत्रहरूमा यातायातको एक कुशल साधनको रूपमा।
यी खुरिएका जनावरहरू फ्याट डिपोजिटको लागि प्रसिद्ध छन् (हम्प्स) यसको पछाडिबाट फैलिएको, हजारौं वर्ष पहिले मानिसद्वारा पाल्पा गरिएको थियो। तिनीहरू खाई रहेका छन् (र अझै पनि छन्), खानाको एक स्रोत (दुध र मासु), जबकि तिनीहरूको छाला परम्परागत रूपमा लुगा बनाउन प्रयोग गरियो। तर सबै भन्दा माथि, यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयोग यातायात को माध्यम को रूप मा छ। सबैलाई धन्यवाद तिनीहरूको विशेष शरीर रचना, विशेष रूपले अनुकूलित मरुभूमि वासस्थान।
1 त्यहाँ ऊँटहरू कति किसिमका छन्?
2 "मरुभूमिको जहाज"
3 युद्धको हतियारको रूपमा ऊँट
त्यहाँ ऊँटहरू कति किसिमका छन्?
यद्यपि यो कुरा याद गर्नुपर्दछ कि संसारमा सबै ऊँटहरू एकै हुँदैनन्, न ती यातायातका साधनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू संसारमा अवस्थित छन् तीन प्रजाति ऊँटहरूको:
ब्याक्ट्रियन ऊँट (क्याम्लस बैक्ट्रियानस), जो मध्य एशियामा बस्दछ। अरू प्रजातिहरू भन्दा ठूला र भारी। योसँग डबल हम्प छ र यसको छाला ऊनी हो।
जंगली बेक्ट्रियन ऊँट (क्याम्लस फेरस), दुई हम्प्सको साथ पनि। यो मंगोलियाको मरुभूमिमा र चीनको भित्री भागहरूमा स्वतन्त्रतामा बस्दछ।
अरबी ऊँट o ड्रमेडरी (क्याम्लस ड्रमेडेरियस), सबैभन्दा लोकप्रिय र असंख्य प्रजातिहरू, १२ करोडको अनुमानित विश्व जनसंख्याको साथ। योसँग एकल कुबडी छ। यो सहारा क्षेत्र र मध्य पूर्वमा पाईन्छ। यसलाई पछि अष्ट्रेलियामा पनि पेश गरिएको छ।
एक ऊँट प्रति घण्टा kilometers० किलोमिटरको वेगसम्म पुग्न सक्छ पानीको एक थोपा पानी पिए बिना लामो अवधिको प्रतिरोध गर्न सक्षम छ। उदाहरणको लागि ड्रममेड्री प्रत्येक १० दिनमा एक पटक मात्र पिउन सक्दछ। यसको तातो प्रतिरोध प्रभावशाली छ: यो आफ्नो शरीर मास को %०% सम्म गुमाए पछि पनि मरुभूमिको तातो मा बाँच्न सक्छ।
ब्याक्ट्रियन ऊँटहरू पिउदै
यि जनावरहरूले यति थोरै पानीले कसरी बाँच्ने? गुप्तमा छ तेल उनीहरूको हिप्समा जम्मा हुन्छन्। जब ऊँटको शरीरलाई हाइड्रेसनको आवश्यकता पर्दछ, यी भण्डारहरूमा रहेको फ्याट टिश्यूहरू मेटाउने पानीलाई मेटाबोलिज गरिन्छ। अर्कोतर्फ, तपाईंको मिर्गौला र आन्द्रामा फ्लुइड्स पुन: अवशोषणको लागि ठूलो क्षमता छ।
तर यसको मतलब यो होइन कि ऊँट पानी बिना बस्न सक्छ। जब पानीको समय हुन्छ, 600०० केजी वयस्क ऊँटले केवल तीन मिनेटमा २०० लिटरसम्म पिउन सक्छ।
तिर्खा र तातोको लागि यो ठूलो प्रतिरोध, धेरै स्तनपायी प्राणीहरूमा भेट्टाउन असम्भव छ, यस पशुको रूपमा मुकुट छ मानिस मरूभूमिमा बाँच्नको सबैभन्दा राम्रो साथी हो.
शताब्दीहरु को लागी, caravans व्यापारीहरूले ठूल्ठूला मरुभूमि क्षेत्रहरू पार गर्न ऊँट प्रयोग गर्थे। उहाँलाई धन्यवाद, यो मार्गहरू स्थापना गर्न सम्भव थियो र वाणिज्यिक र सांस्कृतिक सम्पर्कहरू अन्यथा असम्भव हुने थियो। यस अर्थमा यो कुरा याद गर्नुपर्दछ कि उँट एशिया र उत्तर अफ्रिकाका धेरै मानवीय समुदायहरूको विकासको लागि आधारभूत तत्व भएको छ।
यदि मरुभूमि बालुवाको एक महासागर थियो, ऊँट यसमा यात्रा गर्न एक मात्र तरिका थियो र एक सुरक्षित बन्दरगाह पुग्ने ग्यारेन्टी थियो। यस कारणका लागि यो लोकप्रिय रूपमा परिचित छ "मरुभूमिको जहाज".
उजाड कारभान मरुभूमि पार गर्दै
आज पनि, जब सबै इलाकाका सवारी साधन र जीपीएसले यसलाई यातायातको साधनको रूपमा बदल्न सफल भएको छ, ऊँट अझै पनि धेरै बेडौइन जनजातिहरूले प्रयोग गर्दछ। यद्यपि केही नयाँ देशहरूमा उनको रूपमा नयाँ भूमिकामा देख्न यो सामान्य छ पर्यटक आकर्षण सवारीसाधन भन्दा
यो सामान्य छ कि मोरक्को, ट्युनिसिया, इजिप्ट वा संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता गन्तव्यहरूमा उनीहरूको यात्रामा, पर्यटकहरूले भाडामा लिन्छन्। उजाड मरुभूमिबाट यात्रा। तिनीहरूसँग (सँधै अनुभवी गाईडहरूको हातमा), भावनाहरूको खोजीमा यात्रुहरू खाली र इनहेस्टेबल इलाकामा प्रवेश गर्छन्, पछि मरूभूमिको तारामय आकाशमुनि पालहरूमा सुते। ऊँट सबै भन्दा पछि, रोमान्टिक यात्रा र रहस्यमय साहसिक कार्यहरूको लामो भुलिएको समयको प्रतीक हो।
युद्धको हतियारको रूपमा ऊँट
यातायातको साधनको रूपमा यसको प्रमाणित प्रभावकारिताको साथसाथै यो ऊँट इतिहासभरि प्रयोग भइरहेको छ युद्धको हतियार। पहिले नै पुरातनता मा Achaemenid फारसीहरू तिनीहरूले यी पशुहरूको गुण पत्ता लगाए जुन उनीहरूको युद्धमा धेरै उपयोगी थियो: उसको घोडा डराउने क्षमता.
यसैले धेरै लडाईहरूमा ऊँटहरूमा सवार योद्धाहरूको सहभागिता सामान्य भयो, उत्तम एन्टीडोट दुश्मन घोडसवार शून्य गर्न। ईसापूर्व XNUMXth औं शताब्दीमा लिडियाको राज्यमा विजय पाउन धेरै पुराना कागजातहरूले ऊँटको भूमिकाको प्रमाणित गर्छन्।
ऊँट र ड्रमिडरीहरू सेनामा लड्ने सेनाको हिस्सा भएको छ उत्तर अफ्रिका र मध्य पूर्व रोमन समय भन्दा पहिले र धेरै पछिल्लो समय सम्म। को पनि सेना संयुक्त राज्य अमेरिका १ th औं शताब्दीमा क्यालिफोर्निया राज्यमा उनले खडा गरेको एउटा विशेष ऊँट इकाई बनाए।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » ऊँट, ढुवानीको एक धेरै कुशल साधन
कोरल सेबास भन्यो
त्यो यदि अर्को तरंग हो भने
सेबास कोरललाई जवाफ दिनुहोस्
सेबासोलालाई जवाफ दिनुहोस्
sebas भने भन्यो
Sebas जवाफ दिनुहोस् भने